एसईईपछि कस्तो विषय छनोट गर्ने ?
शुक्रवार, असार २०, २०७६
विद्यार्थीले अध्ययन गर्न खोजेको विषयको कार्यक्रम कुन विश्वविद्यालय वा कलेजमा छ, त्यसबारे पहिले ध्यान दिनुहोस् । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडांै विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलगायतका निजी विश्वविद्ययालयबाट समेत विभिन्न संकायका कार्यक्रमहरुको अध्यापन हुने गरेको छ । यसैगरी केही निजी कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्षहरु पनि अध्यापन गराएका छन् । तपाईं कुन विश्वविद्यायको कोर्ष पढ्न चाहनुहुन्छ, सो बारे निश्चित हुनपर्छ । यस्ता विद्यालयहरुका विषय छान्नुभन्दा पहिले उनीहरुको पाठ्यक्रम, सिलेबस पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । यसरी तपाईंलाई बढी रुचि भएको तथा आफ्नो आर्थिक अवस्थले भ्याउने खालका विषय छान्दा अझ राम्रो हुन्छ ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको सफलता तथा नेपाल तथा विदेशमा दिइने मान्यता हेर्नु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको अर्थ तपाईंले अध्ययन गरेको युनिभर्सिटी कोर्षलाई अर्को विश्वविद्यालयले कत्तिको मान्यता दिन्छ भन्ने हो । अध्ययनका क्रममा अर्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने चाहना राख्दा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कलेजमा अध्ययन गरेको ज्ञानलाई व्यवहारीक रुपमा उतार्न इन्टर्नशिप तथा प्रोफेसनल ट्रेनिङहरुको आवश्यकता पर्दछ । यसको लागि सम्बन्धित कलेजले इन्टर्नशिपका लागि विद्यार्थीलाई आइटी इन्डस्ट्रीमा पठाउने गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ ।
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुः
१) पढ्ने विषयको मार्केटमा कस्तो स्कोप छ ?
आफूले पढ्न लागेको विषयको नेपाल तथा विश्वको मार्केट हेर्न जरुरी हुन्छ । यसैगरी, विषय छान्दा ध्यान दिनुपर्ने अन्य कुराहरुमा आफूले छानेको विषयले लगानीको प्रतिफल कत्तिको छिटो दिन सक्छ । साथै आफूले छानेको विषय प्रति समाजको कस्तो दृष्टिकोण छ ।
कलेजको इन्डस्ट्री तथा बैंक तथा फाइनान्सियल संस्थासँग कस्तो सम्बन्ध छ । कलेजले ग्राजुएट्सलाई कामको अवसर सृजना गर्न सक्छ वा सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय कलेजहरुले राम्रा ग्राजुएट्सलाई केही महिनाको इन्टर्नशिपपछि जब प्लेस्मेन्टको अवसर पनि उपलब्ध गराएको पाइन्छ ।
२) आफुले पढ्न लागेको विषय पढ्न सक्छु वा सक्दैन ? त्यसप्रति आत्मविश्वास कस्तो छ ।
आफूले पढ्न रोजेको विषय पढ्न सकिन्छ वा सकिँदैन त्यस विषयप्रति आफ्नो आत्मविश्वास कस्तो छ भन्ने थाहा पाउनु उपयुक्त मानिन्छ । यो विषममा अध्ययनपछि केही गर्न सक्छु मैले केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि विद्यार्थीले आफूले पढ्न लागेको विषयको जान्न जरुरी हुन्छ । पढ्ने सोच बनाएको विषयमा कस्तो खालको विषयवस्तु छ ? आपूmले पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर मात्र पढाई सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ ।
३) पढ्न लागेको विषयमा लाग्ने खर्च र आफ्नो आर्थिक स्थितिको बारेमा राम्रो जानकारी हुनुपर्छ ।
अध्ययन खर्च पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । अध्ययन खर्च कति लाग्ने भन्ने कुरा विशेषतः कोर्षको प्रकृति र अध्ययन गर्ने क्याम्पस तथा कलेजहरुमा भर पर्दछ । आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रोसँग नबुझी पढ्दा बिचैमा अध्ययनको लागि भनेर छुट्याएको बजेट नपुगेर अध्ययनमा समेत असर गर्ने भएकाले यसको मूल्याङ्कन पहिले नै गर्नुपर्छ ।
४) अध्ययन गर्न खोजेको विषयको कोर्ष सकिएपछि त्यसले दिने सामाजिक तथा आर्थिक प्रतिफलको बारेमा बुझ्नुपर्छ ।
विद्यार्थीले कस्तो खालको शिक्षा लिएको छ भन्ने कुराले सामाजिक स्टाटस पनि दिन्छ । उदाहरणका लागि डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई समाज तथा सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । यस्ता विषय लिई अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई हाम्रो समाजमा सबै किसिमले राम्रो मानिन्छ । यी विषय पढ्दा लाग्ने खर्च तथा पढाई सकिएपछि दिने प्रतिफलले विद्यार्थीहरु यस्ता विषय पढ्न लाालयित हुन्छन् ।
५) अध्ययन गर्न खोजेको विषयमा सरकार तथा निजी कलेजले दिने छात्रवृत्तिलगायतका विभिन्न किसिमका सुविधाको बारेमा बुझ्नुपर्छ ।
सरकारी तथा निजी कलेजले विद्याार्थी तान्नका लागि विभिन्न किसिमका सुविधाहरु दिएको पाइन्छ । यस्ता खालका सेवा तथा सुविधाको बारेमा बुझ्न सकियो भने पढ्न लाग्ने खर्च कम गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन यस्ता सुविधामा पढ्न सकियो भने आर्थिक बोझ पनि कम गर्न सकिन्छ ।
६) पढाइ सकेपछिको भविष्यलाई पहिले नै केलाउन सक्यो भने बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
कुनै पनि विद्यार्थीले पढाई सकेपछि कुन स्तरसम्म पुग्न सक्छु भन्ने कुराको आँकलन उच्च शिक्षा पढ्नु भन्दा पहिले नै सोच्न सक्नुपर्छ । म यो विषय पढेर यो अवस्थासम्म पुग्छु भन्ने लक्ष्य नराखी पढ्दा उक्त विद्ययार्थीले भविष्यमा खासै प्रगति गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । जसले गर्दा विद्यार्थीलाई पढाइको विचमा नै के गर्न, कस्तो जागिर गर्ने भन्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरु उतपन्न हुन सक्छन् । त्यसैले कुनै पनि विद्यार्थीले आफूले पढ्न चाहेको विषयमा पहिले नै सबै कुरा जानेको राम्रो हुन्छ ।